Pibonexia - Tilmaamaha iyo xiisaha xiisaha leh ee Ragga leh | Ragga Stylish
Alicia tomero | | nololeedka, Tiknoolaji, Isbeddellada
Dad baa jira quruxda dhabta ah ayaa la sawiray, sida bini-aadam gaar ah iyo jacayl aan shuruud lahayn oo ay naftooda u qabaan oo dad badani dareemin. Ma ka mid tahay dadkaas? Miyaad dareentaa is-jacaylkaas mashruucu ka hinaaso kuwa kale?
Waa hagaag taasi waa waxa ayaa ka muuqda maanta shabakadaha bulshada, Waxaa jira dad badan iyo shaqsiyaad caan ah oo ka tarjumaya sawirkaas oo ah inay muuqdaan wax ka fog wixii ay qorshayn lahaayeen. Haddii maanta kalsooni la'aantu ku dhacdo dad badan, sawirka dib uga noqda 'pibonexia' waa kan u eg qof qumman, iyo inay ka sii fiicnaaneyso, sida dhabta ah ee iyaga la qiimeyn lahaa.
Ostentation, dhalanteed, male
1 Maxaa loogu magac daray 'pibonexia'?
2 Astaamaha dareema 'pibonexia'
3 Muxuu "lagu qushuucee" u kordhiyaa ego?
Maxaa loogu magac daray 'pibonexia'?
Ereygan waxaa soo saaray Susi Caramelo, majaajiliiste iyo xiddig fayras wax ku biiriya barnaamijka 'Kuwii ka maqnaa '. Hal-ku-dhigga wuxuu ku sharaxayaa soo-saarista ereygan inuu yahay cillad kor u qaadaysa dadka iyo dadka caanka ah ee Mareykanka, laakiin sidoo kale dalal badan iyo dalal kale sida Spain.
Caqliga ereygan ayaa tilmaamaya fikradda ah waxaa jira dad dareemaya qurux badan waxaa ka jira taasi waa. Waxay rumeysan yihiin inay leeyihiin jir dhameystiran, oo leh jir iyo weji xaasid ah, xitaa haddii loo sheego in aysan ahayn, waxay rumeysan yihiin tan ka soo horjeedda.
Sida loogu labisto caqliga
Susi, 'pibonexia' waa mid aad u kala sarreysa shabakadaha bulshada, gaar ahaan barta 'Instagram'. Dad badan oo caan ah ayaa muujiya qeyb ka mid ah quruxdooda oo wey buun buuniyaan iyagoo si xad dhaaf ah u muujinaya sawirkaaga Waa xad-dhaaf, taabasho-taabasho iyo ka-gudubka dhalanteedka si aad u eegto mid qumman. Waa sheygooda ugufiican, waxay kuxiranyihiin hab taas oo kadhigaysa iyaga qorshahooda ugufiican ee umuuqda astaantooda weyn iyo narcissism.
Astaamaha dareema 'pibonexia'
Susi Caramelo sidoo kale waxay dareemeysaa pibonexia. Waxay isku muujisay hal abuurkeeda iyada oo wareysi ay qirtay inay nafteeda "marwalba kulushahay." Guud ahaan, dhammaan dadka leh tayadaan waxay dareemayaan kalgacal naftooda, ogow inaysan ku dhex dhicin buugaagta ay aasaaseen bulshada, laakiin wali waxay u maleynayaan inay aad u fiican yihiin.
Donal Trump waa xiddig aan muran ku jirin oo jecel inuu muujiyo muuqaalkiisa. Wuxuu had iyo jeer buun buuniyaa muuqaalkiisa oo xitaa wuxuu soo galiyay sawirro aan u hoggaansameynin xaqiiqda, halka waxay la muuqataa meydad laga beddelay ama dib loo hagaajiyay Photoshop. Shaki la'aan, shabakadaha bulshada ayaa ah hadafkiisa, kaas oo uu jecel yahay inuu ku ilaaliyo muuqaalkiisa. In kasta oo maanta uu la dagaallamayo caddaaladda maadaama uu ku faafreebay barnaamijyo kala duwan.
David Guetta Isagu waa mid ka mid ah dadka jecel inay isku muujiyaan inuu yahay kan ugu fiican kuwa ugu fiican. DJ-kan caanka ah iyo mid ka mid ah kuwa ugu caansan, sidoo kale wuxuu sawiradiisa u soo galiyaa shabakadaha bulshada isagoo qaadanaya qaabkiisii ​​ugu fiicnaa iyo kan sare lagu xoojiyay taabashada.
Kuwa caanka ah Kim Kardashian waa mid ka mid ah dadka caanka ah ee leh 'pibonexia' weyn. Iyadu keligeed ayaa lagu aqoonsan karaa iyada sawiradiisa iyo sawiradiisa waa hamigiisa weyn iyada la’aanteedna Instagram waxba ma noqon lahayn la’aan tirada dadka ku soo biirey qadiyadooda. Shaki la'aan, waxay sidoo kale la muuqataa taabasho aan shaki ku jirin inay tahay in la muujiyo aag ama in kor loo qaado quruxda qaar ka mid ah astaamaheeda.
Safka waxaa ku weheliya dad kale oo caan ah sida Kylie Jenner oo loogu magac daray kan ugu yar reer Kardashians halkaas oo iyaduna wax laga waydiiyay inay dib u soo ceshato sawiradeeda si ay ugu muuqdaan kuwo aad uga soo jiidasho badan sida dhabta ah. Kendall Jenner Sidoo kale liiska waxaa kujira kuwa si xishood la’aan ah u badalaya sawiradooda.
Muxuu "lagu qushuucee" u kordhiyaa ego?
Dhammaan dadka ku soo biiray shabakadaha bulshada ee ku soo bandhiga jirkooda, waa shaqsiyaad waxay kuxirantahay jilicsanaanta kalsoonidooda. Waxay u adeegsadaan shabakadaha hel "like" sidaasna ku samaysanta xaaladooda xasilloonida iyo kor u qaad naftaada.
Maxay tani u dhaceysaa? Hagaag, in kastoo ay dhiirigelin tahay in la yiraahdo dadka qaba pibonexia waxay jecel yihiin jidhkooda iyo maskaxdoodabaWaxay sidoo kale jecel yihiin inay ka helaan "jecel" badan dadka iyaga la dhacsan si aad kor ugu sii qaado kalsoonidaada. Waxay ubaahanyihiin sahaydaas si ay ula kulmaan gargaar iyo waliba aqbalaada bulshada.
Sidaan horeyba u ognahayna, dadkaas badankood waxay ku dhiiradaan inay waxbadan usii socdaan adeegsiga miirayaasha iyo qallooca muuqaalkiisa dhabta ah. Xaqiiqdii, waxay soo bandhigayaan shakhsiyaddooda, laakiin isla markaa waxaa loo gudbiyaa sidii wax caafimaad iyo madadaalo leh.
In kastoo loo eego fikradaha nafsaaniga ah garan mayno inay tani caafimaad tahay mustaqbalka fog. Qaloocinta sawir muuqaal leh shaandheeyeyaal badan ama Photoshop wax weyn kama tari karto kor u qaadida isku-kalsoonaanta, laakiin waxay u horseedi kartaa nooc kale oo cillad nafsi ah berri.
Baraha bulshada waa aaladaha ugu fiican in aad matali karto qayb naga mid ah. Anaga iyo shaqsi ahaanba ayeynu ku xidhan nahay inaanu u adeegsanno si miyir qab ah oo xilkasnimo ku jirto. Dad badan ayaa eedaas leh 'pibonexia' kuma dhammaado inuu noqdo ilo wanaagsan hadii marka hore ay baashaal noqon karto oo hadii aakhirka ay saameyn ku yeelaneyso aragtida aan ka qabno jirka iyo is jaceelkeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » pibonexia
Lammaanahaygu aniga qorshe ilama sameeyo